warkii.com » XOG: Villa Somalia oo hor istaagtay safar uu Cabdi Xaashi ku tegi lahaa Dh/mareeb
XOG: Villa Somalia oo hor istaagtay safar uu Cabdi Xaashi ku tegi lahaa Dh/mareeb
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi C/llaahi ka joojisay safar uu ku tegi lahaa magaalada Dhuusamareeb si uu kaga qeyb galo shirka Dowladda Federaalka iyo M/goboleedyada.
Shabakadda Warqaad ayaa ogaatay in Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed uu ka mid yahay wafdiga madaxweynaha ,arrinkan oo ka dhigan in madaxweynuhu doonayo inuu shirka si rasmi ah uga qeyb galo.
Guddoomiye Cabdi Xaashi oo dib ugu soo laabtay ka dib markii uu magaalada Garowe kaga soo qeyb galay aaska Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa qorsheynayay inuu tago magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu kaga qeyb galayo Weji labaad ee shirka Dhuusamareeb.
kala aragti duwanaasho xooggan ayaa u dhaxeyso Villa Soomaaliya iyo guddoomiyaha Aqalka sare oo diidan qorshaha Farmaajo ee doorasho qof iyo cod ah.
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka mideysan in dalka xilligan diyaar u ahayn doorasho qof iyo cod ah,islamarkaana laga tasho doorasho kale oo loo dhan yahay.
Qorshaha madaxweynaha ayaa ah in isaga oo shacabka u muujinaya inuu xal doon yahay, haddana wax kasta si hoose u burburiyo.